Reysal Wasaare Kheyre oo Aqalka Sare u sheegay in ay Soomaaliya la wareegeyso amaankeeda – Kalfadhi
Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa sheegay in ay Xukuumaddiisa ka go’an tahay in la tirakoobo ciidanka. Waxa uu sheegay in ay hadda hayaan tirakoob dhan in ka badan 16 kun oo askari, oo ay leedahay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS). “Waxaan rabaa inaan Aqalka Sare u xaqiijiyo iney Xukuumadda Soomaaliyeed ka go’an tahay in ay hesho ciidan tirsan” ayuu ku yiri Khudbad uu ka jeediyey maanta Xafladda Furitaanka Kalfadhiga 5-aad ee Aqalka Sare.
Waxa uu soo hadal qaaday hawlgalada iyo kor u qaadista la sheegay in ay Xukuumaddu ku sameysay xoojinta amaanka Muqdisho. Waxa uu sheegay in ay Ciidanka Dowladdu bilaabeen in ay la wareegaan amaanka dalka. “Dowladda Soomaaliyeed waxay bilowday in ay la wareegto dalka” ayuu yiri Kheyre. “Ciidamada dowladdu waxay bilaabeen hawlgalo lagu xoojinayo amniga caasimadda” ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sheegay in hawlgalada Muqdisho ay hormuud u yihiin booliska.
Reysal Wasaaruhu wuxuu ku fogaaday muujinta shaqada xukuumaddiisa ee dhinaca amaanka, dhaqaalaha iyo dowladnimada, gaar ahaan isla xisaabtanka iyo cadaaladda. Waxa uu sheegay in ay Xukuumaddiisu meel fiican ku waddo dalka, sida uu hadalka u dhigay. Korarka dakhliga dowladda ayuu ku celceliyey, isagoo sheegay in ay xukuumadiisu geli doonto shaqadii ugu dambeysay ee deenta Soomaaliya looga cafinayo.
“Waxaan rajeynayaa in sanadkan lagu jiro uu dakhliga dowladdu gaaro $190 milyan” ayuu yiri Kheyre, oo sheegay in hadba sanadka ka dambeeya sanadkii hore, xiliga xukuumaddiisa, uu dakhliga dowladdu kor u sii socdo, waxa uuna tilmaamay in 3-dii bil ee ugu horeysay sanadkan ay tahay 3-dii bil ee ugu dakhli uruurinta badneyd Soomaaliya muddo 30 sano ah, sida uu hadalka u dhigay.
Isagoo xusaya $500 oo bilyan, oo uu sheegay in Soomaaliya deen ahaan loogu leeyahay, ayuu tilmaamay in ay xukuumaddiisu ugu timid xafiiska $100 Milyan oo deen ah, oo ay shacabku ku lahaayeen DFS. Waxa uu sheegay in intii ay Xukuumaddiisu jirtay aysan Soomaaliya wax deen ah soo gelin. Waxa uuna yiri “Waxaan bisha soo socota saxiixi doonnaa qandaraaskii ugu dambeeyey oo ah kii deynta noolaga cafin lahaa”.